Asthma - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ (Asthma) အကြောင်း သိကောင်းစရာ… Asthma ဆိုတာ ပန်းနာရင်ကြပ် လို့ ခေါ်တဲ့ အဆုတ်ရောဂါတမျိုးပါ ။ ဒီရောဂါက အဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းလေးတွေ ရောင်ရမ်းရာကနေ တဖြည်းဖြည်းကျဉ်းမြောင်းလာပီး အသက်ရှူရခက်ခဲလာရာကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ် ဘယ်အရွယ်တွေမှာဖြစ်တတ်လဲ.??ဒီပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါဟာ အသက်အရွယ်မရွေးမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ် ၊ တချို့လူတွေအတွက် အရမ်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါတခုလဲဖြစ်တယ် ၊မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ ရောဂါ တစ်ခုလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါကိုဘယ်လိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ရမလဲ..? ဒါကတော့ မလွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ၊ ဒီရောဂါကို လုံးဝပပျောက်အောင်တော့ ကုသလို့မရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ရောဂါလက္ခဏာကိုတော့ သက်သာအောင်ပြုမူနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့် ထိန်းချုပ်ပီး ဘဝကိုကောင်းမွန်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ် ။ ပန်းနာရင်ကြပ်ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာက ဘာတွေလဲ…? ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ – -ချောင်းဆိုးတာ (cough) -အသက်ရှုတဲ့အခါမှာ -တရွှီရွှီနဲ့ မြည်သံကြားရတာ(wheezing) -အသက်ရှုရခက်တာ (trouble breathing) -ရင်ဘတ်မှာ တင်းကြပ်နေသလိုခံစားရတာ -အသက်ရှုရင်နာသလိုခံစားရတာ -အားမရှိသလိုခံစားရတာ ပင်ပန်း နုံးချိတာ -အသက်ရှုရခက်ခဲတာကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မရခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာ လူတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီပဲပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်၊ ဒီ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါဟာဆိုရင် COPD လို့ခေါ်တဲ့ နာတာရှည် အဆုတ်ရောင်ရောဂါနဲ့လဲ ဆင်တူပါတယ် ။ ဘယ်လိုအရာတွေက ရောဂါဖြစ်စေတာလဲ….? ရောဂါဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ ⁃ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းမှာ ပိုး (Infection)ဝင်တာ (flu, colds, sinusitis) ⁃ တစ်စုံတစ်ခုနဲ့ Allergyရှိတာ (eg. ပန်းဝတ်မှုံ၊အမွှေး၊ နံ့သာ၊ ဖုန်မှုန့် etc..) ⁃ လေထုညစ်ညမ်းမှု ⁃ ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်း ⁃ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲ ⁃ ကိုယ်လက်အားကစားလှုပ်ရှားခြင်း (Exercise) ⁃ စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်ခြင်း (anxiety laughter sadness or stress ) ⁃ Ready made အစားအစာ (တာရှည်ခံဆေးပါဝင်သော ) စတဲ့အရာတွေကနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Asthma က COPD ဖြစ်လာနိုင်စေလား….? Asthma က အဆုတ်ရောဂါတမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် COPDလို့ခေါ်တဲ့ နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် Asthma ရောဂါအခံရှိတဲ့သူတွေ ဆေးလိပ်သောက်သုံးတဲ့အခါ COPDလို့ခေါ်တဲ့ ရောဂါဟာပိုပီးတောင်ဖြစ်နိုင်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ် ပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ COPDရောဂါရှိတဲ့ လူရဲ့ 40%ဟာလည်းပဲ Asthma ဖြစ်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ..? Asthma နဲ့ COPD ၂ခုလုံးကိုကာကွယ်တဲ့နည်းကတော့ life styleကို ပြောင်းလဲနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ⁃ Asthma action plan ကို သေချာလိုက်နာခြင်း ⁃ ရာသီတုတ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး (Annual Flu Vaccine) များထိုးခြင်း ⁃ ရင်ကြပ်တာကို ပိုဆိုးရွား (irritate)စေတဲ့အရာတွေကိုရှောင်ရှားခြင်း ⁃ Allergenတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုလျှော့ချခြင်း ⁃ ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုလျှော့ချခြင်း ⁃ ခုခံအား အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းကုထုံး (Allergy shot) ရယူခြင်း စသည်အားဖြင့် သက်သာအောင်နေထိုင်ပီး ပန်းနာရင်ကြပ်မှ နာတာရှည်အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် By DrTT